I-Double Ellicott Dredgers Tag-Team Michigan Stamp Sands
Ama-brand elredott® brand dredges amabili asetshenziswa ngokuhlangana ukusiza vula ishaneli lokuzulazula ungene eGrand Traverse Harbor eMichigan, iphrojekthi eyaqedwa ngoJulayi 2020.
Itheku beliminyene nesihlabathi sesitembu, imfucumfucu yamadwala amnyama namnyama ampunga okusalile ekucutshungweni okungumlando kwensimbi. Phakathi nekhulu le-19 nele-20 leminyaka, izigayo zesitembu eNhlonhlweni YaseKeweenaw zakhiqiza imfucumfucu eyizigidi ezingama-25, eyabekwa ngokusemthethweni ngaseLake Superior.
Ukuguguleka kwenhlabathi nemisinga eminyakeni edlule kudale ukuthi isihlabathi sesitembu sikhukhuleke kancane siye ngaseningizimu ngasenhlonhlweni yaseGay, eMichigan, sakha ugu olumnyama kanye nama-clogs ethekwini. Isihlabathi sesitembu esingaba yingozi saphinde sasongela impilo yasemanzini kule ndawo, kufaka phakathi indawo yokuhlala echibini, futhi kwakudinga ukudilizwa.
NgoMeyi we-2019, i-Ellicott ikhasimende le-PCI Dredging laqala ukukhipha izihlabathi zesitembu lisebenzisa i-Ellicott® Model 670-33 dredge namapampu ama-5 booster kuze kube sebusika, lapho izivunguvungu zigcwalisa izindawo ezibunjiwe.
The I-670 Series kuyinto ephathekayo i-cutterhead suction dredge ethuthwa kalula futhi ihlanganiswe. Le dredge eguquguqukayo ilungele noma yimuphi umnikazi we-dredge noma i-opharetha efuna ukuthenga umkhumbi okulula ukuwusebenzisa. I-670 ijwayele ukusetshenziselwa amaphrojekthi wokuzulazula ngamancane amachweba, imifula, kanye namaphrojekthi wokukhulula amanzi ngaphakathi ezweni.
Ngentwasahlobo ka-2020, abakwaNewt Marine babenenkontileka engaphansi kokulanda umsebenzi ne-Ellicott yabo I-1270 dredge nepompo yokulekelela. I-Series 1270 iyi-cutterhead dredge eguquguqukayo enamazinga amahle kakhulu wokukhiqiza wokujula kokujula kuze kufike ezinyaweni ezingama-50 futhi ijwayele ukusetshenziselwa amachweba osayizi ophakathi, amachweba, imifula, namaphrojekthi wokudonswa kwamanzi angaphakathi komhlaba.
Iphrojekthi yaseMichigan yesihlabathi, eyayixhaswe yi-Environmental Protection Agency kanye ne-US Army Corps of Engineers, yaqedwa ngoJulayi.